Koorsooyinka AP - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Ka faa'iideyso khibradaada dugsiga sare kuna kasbato dhibcaha kulliyadda barnaamijkeenna Meelaynta Sare (AP) ee Dugsiga Sare ee Minnetonka (MHS). Macallimiinteenna AP waxay jecel yihiin koorsooyinkooda waxayna jecel yihiin inay taageeraan ardayda howshan heer jaamacadeed ah qabanaya. Go'aan qaadashadooda ayaa waxtar u leh ardaydeena. Waxay kuxirantahay dhibcahaaga imtixaanka AP iyo siyaasadaha amaahda kulleejada, waxaad kasban kartaa amaahda kulliyadda ama istaagga sare ee inta badan kulleejooyinka iyo jaamacadaha qaranka.
Waxaan bixinnaa 28 koorsooyin AP ah oo ku saabsan Ingiriisiga, luqadaha adduunka, cilmiga bulshada, taariikhda, sayniska, xisaabta, sayniska kombiyuutarka iyo farshaxanka. MHS sidoo kale waxay bixisaa koorsooyin AP ah oo kala duwan iyada oo loo marayo Tonka Online .
Macluumaadka Imtixaanka AP & IB *
* Minnetonka Google Account Ayaa Loo Baahan Yahay
Maxaa Looga Qayb Galayaa?
Ku kasbado geesta u diyaargarowga kulleejada
Ka istaag Nidaamka Ogolaanshaha Kulliyadda
Burburiso Hormoonnadaada Wax-garad
Koorsooyinka Meelaynta Sare (AP) (PDF)
2021 Qoraalka AP (pdf)
AP wax ayey siisaa qof walba. Shuruudaha kaliya ayaa ah xiisaha xoogan ee maadada aad qorsheyneyso inaad barato iyo rabitaanka inaad si adag ushaqeyso.
Cilmi baaristu way cadahay: Markaad qaadanaysid koorsooyin heer kuliyadeed ah oo dugsiga sare ah, waxaad u badan tahay inaad dhammaysato shahaadada kulliyadda. Haddii laguu abaal mariyo ama ha lagu abaalmariyo, qalin-jabiyayaasheena ayaa noo sheegaya in koorsooyinka AP ay si fiican ugu diyaariyeen adkaanta, qorista iyo xirfadaha waxbarasho ee looga baahan yahay guusha mustaqbalka.
Ku bilow bilow shaqo heer jaamacadeed ah
Kordhi xirfadahaaga qorista oo aad u adkeeysid farsamooyinkaaga xallinta dhibaatooyinka
Samee caadooyinka waxbarasho ee lagama maarmaanka u ah wax ka qabashada shaqada koorsada adag
Hesho dhibcaha kulleejada (85% ee ardayda Minnetonka AP waxay keensadaan 3 ama wax ka badan imtixaanadooda AP, dhibcaha ugu yar ee looga baahan yahay tixgelinta dhibcaha kulleejada)
Muuji bisaylkaaga iyo u diyaarsanaanta kulliyadda
Muuji rabitaankaaga inaad is riixdid oo adkaysatid
Carrabka ku adkee sida ay kaaga go'antahay heer sare ee tacliimeed
Ka baari adduunka aragtiyo kala duwan, oo ay ugu muhiimsan tahay adigu
Si maadooyin ah oo qoto dheer oo faahfaahsan u barto
Qaado masuuliyada sababaynta, lafagurida iyo fahmida fikradaha muhiimka ah naftaada
Markaad go'aansato inaad qaadatid caqabadda AP, way fududahay inaad iska diiwaangeliso nidaamkaaga diiwaangelinta koorsada caadiga ah. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, kala hadal macallimiintaada hadda, macallinka AP, la-taliyahaaga, ama Laura Herbst , Isku-duwaha Waxbarashada Sare, wixii ku saabsan koorsooyinka aad rabto inaad qaadato. Kala hadal culeyska shaqada ee koorsada iyo diyaar garow kasta oo aad u baahan karto.
Liis buuxa oo ah koorsooyinka AP, hoos ka eeg.
Koorso: # AP320, S1
Koorso: # AP322, S2
Bayoolaji meelaynta horumarsan waxaa loogu talagalay inay bixiso khibrado barasho oo u dhiganta koorsada bayoolajiga sannadka koowaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Biology
AP Kalkulas AB
Koorso: # AP404, S1
Koorso: # AP406, S2
Shuruudaha: B ama ka sii fiican Precalculus, Precalculus Honors ama Calculus
Koorsadani waxay u dhigantaa simistarka koowaad ee xisaabinta kulleejada. Waxay diirada saareysaa iskuduwaha kaladuwan ee iskudhafka ah iyo xisaabinta iyo codsiyada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Calculus AB
Koorso: # AP408, S1
Koorso: # AP410, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: C ama ka fiican AP Calculus AB ama A- ama ka sii fiican Calculus
Koorsadani waxay u dhigantaa koorso xisaabeedka koolejka semesterka labaad. Waxaa ka mid ah dib-u-eegista AP Calculus AB oo ay weheliso isdhexgalka horumarsan iyo farsamooyinka kala-duwanaanta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Calculus BC
Koorso: # AP304, S1
Koorso: # AP306, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: A ama B xagga cilmiga sayniska iyo sharafta sare iyo Aljabra sare
AP Chemistry wuxuu baraa fikradaha iyo codsiyada kulleejada sannadka koowaad Chemistry. Nidaamka xallinta dhibaatooyinka ayaa si joogto ah loo qaabeeyey waxaana la filayaa in ardayda dooraneysa koorsadan ay qaadan doonaan Imtixaanka AP.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Chemistry
AP Sayniska Kombuyuutarka A
Koorso: # AP650, S1
Koorso: # AP652, S2
Fasalada (yada) la bixiyay : 9-12
Heerarka : .5 (semesterkiiba)
Shuruudaha looga baahan yahay: B ama ka fiican Aljebrada Sare, Maamuusta Aljabrada Sare, ama oggolaanshaha Macallinka
AP Computer Science A waxay u dhigantaa semestarka koowaad, koorso heer kuliyadeed ah ee sayniska kombiyuutarka. Koorsadu waxay ardayda ku baraysaa aasaaska sayniska kombiyuutarka, iyadoo diiradda la saarayo luuqadaha barnaamijyada ujeedo-u-jeedka ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Computer Science A
AP Faransiis V
Koorso: # AP500, S1
Koorso: # AP502, S2
Shuruudaha: Faransiis IV iyo ogolaanshaha macallinka ama IB French SL
Koorsadu waxay ardayda siisaa fursado ay kula xiriiraan dhaqanka Francophone iyagoo adeegsanaya saddexda nooc ee wada xiriirka (shaqsi ahaanta, tarjumaadda, iyo bandhigga) hawlo kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP French V
Luqadda AP iyo Qaab dhismeedka 10
Koorso: # AP100, S1
Koorso: # AP101, S2
Shuruudaha: Ingiriis kasta oo 9 Koorso ah
Ardaydu waxay falanqeyn doonaan tiro ballaadhan oo dhib badan oo sheeko-xariir ah iyo tiraab la'aan ah waxayna raad raaci doonaan adeegsiga hadallada marka la sameynayo doodaha iyo rafcaannada. Ardaydu way akhrin doonaan oo baari doonaan qormooyinka, waraaqaha, khudbadaha, sawirrada, farriimaha warbaahinta, xusuus-qorrada, iyo taariikh-nololeedka qorayaasha iyo xaaladaha taariikhiga ah ee kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Language iyo Curiska 10
Suugaanta AP iyo curinta
Koorso: # AP102, S1
Koorso: # AP103, S2
Shuruudaha: Ingiriis kasta 10 ama 11 Koorso
Koorsadani waxay xoojineysaa akhrinta saxda ah, ee garashada suugaanta waaweyn ee Ingiriiska iyo Mareykanka oo mataleysa dhammaan noocyada suugaaneed - gabayada, riwaayadaha, riwaayadaha, sheeko gaagaaban - oo kahadleysa qarnigii 17aad ilaa 20aad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan suugaanta AP iyo curinta
Aragtida AP Music
Koorso: # AP660
Shuruudaha: A ama B ee Aragtida 1 ama pretest / arjiga kahor diiwaangelinta
Aragtida Muusiga 2 waa fasal hal-xilliyeed oo loogu talagalay ardayda khibrad u leh muusigga laakiin doonaya inay sii horumariyaan oo kordhiyaan xirfadaha akhriska, qorista, dhageysiga, iyo falanqaynta muusikada. Waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu diyaariyo ardayda xiiseyneysa barashada muusikada heerka dugsiga sare kadib.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan aragtida AP Music
AP Physics 1 - Fasalka 9aad
Koorso: # AP300, S1
Koorso: # AP302, S2
Shuruudaha: Isqorista isku midka ah ee Ingiriisiga 9 Isgaarsiinta Maamuusta
AP Physics I waa koorso fiisigis ku saleysan aljebra oo loogu talagalay in lagu horumariyo faham qoto dheer oo ku saabsan waxa ku jira laguna dabaqo aqoonta sheybaarada baaritaanka ku saleysan. Koorsada Ingiriisiga ayaa diiradda saareysa u diyaarinta ardayda fursadaha cilmi baarista mustaqbalka iyo barashada sida loola xiriiro qaab farsamo iyo xirfadeed.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Physics 1 - Fasalka 9
AP Physics C: Korontada iyo Magnetismka oo leh Mawduucyo Fisigis Casri ah
Koorso: # AP324, S1
Koorso: # AP326, S2
Koorsadani waxay dhammaystireysaa 1.0 ee deynta Sayniska.
Shuruudaha looga baahan yahay: Koorsada Calculus iyo AP Physics 1 (ama koorso kale oo fiisigis ah oo macallimiintu kula talinayaan).
AP Physics C: Korantada & Magnetism waxay u dhigantaa koorsada fiisigiska kuleejka ee ku saleysan xisaabta ku saleysan kal-fasalka labaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Physics C: Korontada iyo Magnetismka leh Mawduucyada Fiisigiska casriga ah
AP Physics C: Makaanikada - CUSUB EE 2021-22
Koorsada # AP328, S1
Koorsada # AP330, S2
Fasalada (yada) la bixiyay: fasalka 11-12
Shuruudaha: Sayniska Jirka, Kalkulaska (dhammaystiran ama isku mid ah)
Kani waa koorso sanad socotaa oo lagu bixiyo MHS.
AP Physics C: Farsamoyaqaanku wuxuu u dhigmaa koorsada koorsada koorsada koowaad ee maadada fiisigiska ku saleysan xisaabta. Koorsadu waxay ku saabsan tahay Kinematics, Sharciyada Newton, Shaqada / Tamarta / Awoodda, Dareenka, Wareegga, Oscillations.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Physics C: Makaanikada - CUSUB 2021-22
Cilmi baarista AP
Koorso: # AP107, S1
Koorso: # AP108, S2
Shuruudaha: Seminarka AP inta lagu jiro sanadka yar
Cilmi-baarista AP waxay u oggolaaneysaa ardayda inay si qoto dheer u sahamiyaan mowduuc tacliimeed, dhibaato, ama arrin danaha shaqsiyeed. Baadhitaankan, ardayda ayaa qorshaynaya, qorshaynaya, oo samaynaya baadhitaan ku saleysan cilmi baaris muddo sanad ah si wax looga qabto su'aasha cilmi baarista
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Research
Koorso : # AP105, S1
Koorso : # AP106, S2
Koorsadan sidoo kale waxaa lagu qaadan karaa iyada oo loo marayo VANTAGE # V102, Ganacsiga Caalamiga ah ama VANTAGE # V700, Siyaasadda Dadweynaha (mid uun dooro)
Heerarka : 1.0 (koorso sanad-dheer ah)
Shuruudaha : Ingiriis kasta 10 ama 11 Koorso
AP Seminar waa koorso aasaasi ah oo ardayda ku mashquulisa wada hadalo manhajyo kala duwan ah oo sahamiya kakanaanta mowduucyada tacliimeed iyo kuwa dhabta ah ee dunida ka jira iyo falanqaynta aragtiyada kaladuwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Seminaarka AP
AP Isbaanishka V Luqadda & Dhaqanka
Koorso: # AP504, S1
Koorso: # AP506, S2
Shuruudaha: Isbaanishka IV Maamuusta
Koorsada AP Isbaanishka AP iyo Dhaqanka waxay u oggolaaneysaa ardayda inay u adeegsadaan xirfadahooda horumarinta luqadaha siyaabo cusub oo dhab ah. Ardayda waxay la kulmaan oo ay falanqeeyaan qoraalo kala duwan usbuuc walba.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Spanish V V & Dhaqanka
Isuduwaha Waxbarashada Sare
Ka baro AP bogga shabakadda Guddiga Kulliyadda
Baro sida loogu diro buundooyinka kuliyadaha
Ka hel buundooyinkaaga AP bisha Luulyo www.apscore.org